Ukulawula ii-CTA okanye iiNtengiso ngeWordPress | Martech Zone
Ukulawula ii-CTA okanye iiNtengiso ngeWordPress
NgoMvulo, nge-30 kaDisemba ngo-2013 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 1, 2017 Douglas Karr
Sisebenzisa indibaniselwano yokuthengwa kweentengiso kwindawo yethu- kubandakanya umnxeba oya kwizenzo ezazisa ngeenkonzo zethu, iintengiso ezibandakanyekayo zeenkampani esizithembileyo, kunye neentengiso ezixhasiweyo neenkampani esizikhethele ukusebenzisana nazo. Indibaniselwano eyahlukileyo yeephakeji inzima kakhulu, ke sidibanise amabala entengiso kumxholo wethu ukulawula iintengiso.
Idityaniswe ne Ukubonakala kweJetpack Ngamawijethi, ukubeka iifowuni zokwenza into efanelekileyo okanye ezinamandla okanye iintengiso kulula kakhulu ukuzenza ngeWordPress namhlanje. Indawo yakho yeWordPress ayinakho ukubonelela ngentengiso yangaphandle okanye ifuna iindlela esizenzayo. Ngapha koko, unokufuna ukulawula ii-CTAs zakho. I-AdPress yi-WordPress iplagi yakhelwe ngokukodwa oku.
Ingxelo yiplagi-yeprimiyamu yokulawula iiNtengiso. Iqonga elinamandla nelibonisa ngokupheleleyo ukuthengisa kunye nokubonisa iintengiso zebhlog yakho yeWordPress:
Ukuseta ngokulula -Yila umkhankaso wakho ngonqakrazo olumbalwa ngeAdPress Ad Designer. Chaza ukuba uza kubonakalisa njani intengiso, umnxeba wentengiso, ikhontrakthi yentengiso… Ukudibanisa indawo yakho yentengiso kwibhlog yakho kulula. I-AdPress inewijethi, ikhowudi emfutshane kunye nenkxaso yomsebenzi.
Ukuthengisa ngokuzenzekelayo -Abasebenzisi babhalisa kwaye bathenge ii-Ad Spots kwideshibhodi yabo. Intlawulo iphathwa ngokuzenzekelayo ngePayPal. Xa umsebenzisi ethenga, waziswa kwideshibhodi yakho, kwaye unokuyamkela okanye uyikhabe iNtengiso yakhe. Ukubuyiselwa kwemali kwePayPal kuyaxhaswa nako.
Uhlalutyo lweNtengiso Izibalo zeNtengiso ziyafikeleleka kubo bobabini abalawuli kunye nomthengi othenge intengiso. I-AdPress ibonelela ngeenkcukacha manani nge-CTR, iAvhareji kunye neetshathi entle.
Imbali, ukungenisa ngaphakathi okanye ukuthumela ngaphandle, ulwenziwo -I-AdPress irekhoda imbali yokuthengwa kweNtengiso nganye. Ikwanamandla okungenisa kunye nokuthumela ngaphandle axhasa yonke into okanye isahlulo sedatha yakho kwifayile yokuxhasa. Iintengiso zeAdPress zingenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo. Ikhowudi ye-HTML kunye ne-CSS ekhutshiweyo yeeNtengiso inokutshintshwa ukusuka kwiphaneli yokuseta.
Uncedo neNkxaso -I-AdPress iza nefayile yoncedo eneenkcukacha. Banikezela ngenkxaso ekhawulezileyo (iqonga + le-imeyile). Lindela impendulo ngaphakathi kosuku okanye ezimbini.
Sebenzisa ikhonkco lethu lokudibana kwaye unako khuphela i-AdPress kwindawo yakho ye- $ 35 nje. Iplagi inezilinganiso eziphezulu kunye nokuthengwa phantse kwewaka ukuza kuthi ga ngoku.
tags: umphathi wentengisoUxinzeleloumphathi wephuloUmphathi wentengiso wegamaumphathi wephulo lomyalezoiplagi yamagama
Ixesha elide lokuThengisa iziQinisekiso
I-Salesforce: Unyaka wakho oZenzekelayo kuVavanyo lweNkcazo